ငါ Mac ကနေပေါ်ရက်သတ္တပတ်၏အကောင်းဆုံး | ငါက Mac ပါ
Apple Pay၊ Faceship စျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ Black သောကြာနေ့နှင့်အခြားများစွာရှိသည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
ဘယ်လိုဒီမဟုတ်ရင်ယခုအပတ်အားဖြင့်မှတ်သားခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် အနက်ရောင်သောကြာနေ့၏အခမ်းအနား။ Black Friday သော့ဟုလူသိများသောဤအရာသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ စပိန်နိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှ၎င်းတို့သည် bandwagon နှင့်တကယ့်အစွမ်းထက်သောနည်းဖြင့်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသော်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရန်လိုသည်။ ဒီတော့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အလေးပေးဖော်ပြသွားမှာကတော့ Mac အတွက်ဒီအထူးလျှော့စျေးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်သောဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
သို့သော် Black သောကြာနေ့နှင့်သက်ဆိုင်သောအထူးလျှော့စျေးများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အခြားသတင်းများအပြင်ကျွန်ုပ်သည် Mac မှအခြားထူးခြားသောသတင်းများလည်းရရှိခဲ့သည်။ Apple ကကျွန်တော်တို့ကို beta ဗားရှင်းမပါပဲထားခဲ့ပါ သင်၏စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအတွက်၊ ဒါက Apple ကိုတကယ်ထူးဆန်းသည်။
ငါအစအ ဦး မှာကြေညာခဲ့သည်အတိုင်း, အနက်ရောင်သောကြာနေ့ရက်သတ္တပတ်ကျော်ယူ။ ငါတို့သည်ဤအပိုင်းကိုအတိအကျစတင်ခဲ့သည် ဒီသတင်းနှင့်အတူ. တစ်ခုခုဝယ်ခဲ့တာလား အကယ်၍ အဖြေသည်ဟုတ်လျှင်၊ မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။
လာမည့်သတင်းသည် Apple Pay နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မကြာခင်မှာပဲငါတို့ရပါလိမ့်မယ် ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစပိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် ဒါပေမယ့်စျေးဆိုင်သူတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ရှိသည်နှင့်ဤသည်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်အရာဖြစ်တယ် Square ကုမ္ပဏီ ဒီခြေလှမ်းကိုဖြေရှင်းဖို့။
ဒီသတင်းဟာထူးခြားထူးခြားမှုတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ၎င်းသည်စပ်စုမှုနှင့်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာနည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Apple Watch ပိုင်ရှင် သူအချို့ဒဏ်ရာများနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့သည် သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်အတော်လေးအရေးကြီးသောနှင့် အဆိုပါ cupertino ယောက်ျားလေးများရဲ့နာရီပေါ်မှာဖြောင့်ကအပြစ်တင်ပါတယ်. Apple ကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ် ကျနော်တို့ရလဒ်ကိုမကြာမီသိရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုမှာ Apple ၏ကုမ္ပဏီကို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြစ်သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်။ ခင်ဗျားတို့ထဲကအများစုဟာ Apple ကကုမ္ပဏီများစွာကို ၀ ယ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုအခုအချိန်မှာတွေးကောင်းတွေးနေမိနိုင်ပေမဲ့၊ ဒီဟာကကာတွန်းကားတွေရဲ့မျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုအခြေခံပြီးသက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ avatars (သို့) တခြားကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းပညာတခုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုသံသယမရှိဘဲအလွန်ကောင်းသောဝယ်ယူပုံရသည်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့စွန့်ခွာ ဆိုင်းဘုတ်များ အက်ပဲလ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေရာအနှံ့အပြားမှာနေရာချနေတယ်၊ သူတို့သည် Apple TV အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားကြသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » အတော်ကြာ » Apple Pay၊ Faceship စျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ Black သောကြာနေ့နှင့်အခြားများစွာရှိသည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
3D Touch ကို သုံး၍ စာသားကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် ရွေးချယ်၍ Edit လုပ်နည်း
Amazon Prime Video သည်ယခုနှစ်မကုန်မီတွင် Apple TV အသစ်တွင်ပြသရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်